Aad Ugu dambeyntii ka samaysan maskaxdaada si rujin aad telefoon ama kiniin ah, laakiin aad u hesho xayiran in xulashada mid ka mid ah xaq u badan oo qalab xidid Android? Haddii aadan haysan in. Article saamiyada Tani waxay aad u fiican 5 software xidid Android oo ugu wanaagsan ee 3-ada xidid Android.
Qaybta 1. Best 5 Android soo afjarno Software in Root Android la Computer
Qaybta 2. Best Apps 3 Root u Android inay Root Android aan Computer
Qaybtan, waxaan ku talinaynaa ugu fiican software 5 xididka ah ee Android, kaas oo u saamaxaaya in ay ka rujin aad telefoon ama kiniin ka computer si fudud oo ku haboon.
Wondershare MobileGo waa mid ka mid ah software ugu wanaagsan ee xididka ah ee Android aad abid arko. Waa in xal loo helo in la isticmaalo u soo afjarno telefoonka Android ama kiniin ah ee 1 click. Ka sokow, waxa ay la jaan qaada telefoonada weyn Android iyo kiniiniyada soo saaray Samsung, HTC, Sony, Motorola, LG, Huawei, Acer, Google iyo in ka badan.
100% ammaan iyo xaqiijisatay, halis lahayn.
MA madhantahay damaanad.
Taageerada in ka badan 3, 000 telefoonada Android iyo kiniiniyada.
Kaabta / celin xog-dejinta hor / ka dib soo afjarno.
Maamul rujin phone Android ama kiniin ah hal meel.
Ma bixiyaan shaqo unroot in muddo ah.
Kingo waa software kale oo lacag la'aan ah Android rooting. Sida MobileGo Wondershare, waxa kale oo aad u saamaxaaya in ay ka rujin telefoonka Android ama kiniin ah ee 1 click. Waxa ay taageertaa Android 2.3 ilaa Android 4.2.2, oo si fiican u shaqaysa iyada oo HTC, Samsung, Sony, Motorola, Lenovo, LG, Acer, iyo wixii la mid ah.
Si buuxda u la jaan qaada Android 2.3 ilaa Android 4.2.2.
In loo sahlo in meesha laga saaro xididka waqti kasta.
Safe oo khatar la'aan.
Ma taageeri Android 4.4 ama kor.
SRSRoot waa software rooting yar Android. Sidaa daraadeed, waxaad saari kartaa telefoonka Android ama kiniin ah, iyo sidoo kale ka saar helaan xididka la click hal. Waa lacag la'aan ah oo ku siinayaa laba hab oo loo xididka. Mid ka mid ah waa Device Root (All Methods) kale waa Device Root (SmartRoot).
Si fiican u shaqeeyaan Android 1.5 ilaa 4.2 Android.
Hanad 4. Root
Sida ay magaceeda soo jeedisay, hanad Root waa software xidid smart Android abuuray ee Shiinaha. Waxay ka dhigaysa Android soo afjarno fudud, si fudud oo dhakhso ah.
Taageer ka badan 10,000 oo Android telefoonada.
Mid ka mid ah click in xidid, fudud oo fudud ah.
In loo sahlo u iftiimiyo ROM caadadii, oo ka saari dhisay-in-barnaamijyadooda ka dib soo afjarno.
La jaan qaada Android ka 2.2 in 4.4.
Ma bixiyaan shaqo unroot in muddo ah
Sida hanad Root, iRoot waa software kale xidid awood badan ku abuuray dadka Shiinaha. Just mid click, oo aad noqon kartaa sayidkii telefoonka Android ama kiniin.
Taageer kumanaan telefoonada Android.
Cabirka aflaxaada sare ee rooting.
U shaqeeya 3000+ qalabka Android, oo ay ku jiraan Samsung, HTC, LG, Motorola, iwm
Waayo, Supers hore
SuperSU Pro: SuperSU (waxay u taagan tahay user super super) waa xidid helaan app for Android, taas oo siin karo ama loo diido in ay xididka mar kasta app kasta oo weydiista helaan xididka. Waxaa qori doorashadaada ayna u oggolaadaan in barnaamijyadooda kuwa si ay u helaan xidid aan taasoo keentay. Waxa kale oo ka dhigaysa log ah Furidda xididka.
Helitaanka Root keentay, gashid, iyo farriimaha.
Si ku meel gaadh unroot ama gebi ahaanba unroot aad telefoon ama kiniin.
La shaqee xitaa marka Android waxaa si fiican u booted.
Toosa on degdeg ah.
Shaqee sidii nidaamka app.
Waxaa Furidda adigoo garaacaya * # * # 1234 # * # * ama * # * # 7873778 # * # * ka dialer xitaa waa laga qariyey launcher ah.
4- mawduucyada Selectable Dark, Light, khafiifa Dark Actionbar, iyo qalab Default.
5- walxood Selectable u app.
App siman, ma load dheeraad ah oo ku saabsan processor.
Waxay noqon karaan maqan.
Yaryar ee size, meel 2.2MB kaliya.
Waxaad ma xiri karaan app la pin ah, laakiin habkaani waxaa lagu darayaa in version Pro taas oo version lacag ah app this.
Download SuperSU Pro ka Google Play Store >>
App Tani dhow falaa la mid ah sida SuperSU. Iyadoo app this aad doonaysid in aad hesho ilaalinta PIN lacag ah, oo laga heli karo ka dib markii bixinta lacagta ee SuperSU ah.
App Tani waa wax yar oo culus marka la barbar dhigo SuperSU, marka ay timaado processor isticmaalaa. Interface ma ahayn in ay wanaagsan tahay marka version beta la bilaabay, laakiin version rasmiga ah uu yahay mid fiican oo ay maamushaa si habsami leh. Sameeysa ee app this ayaa ku dhawaaqay in app this mar walba xor ah uu noqon doono iyo version ma bixiyo la abid bilaabi doonaa.
Waxay bixisaa taageero user multi (android 4.2 iyo wixii ka dambeeyey).
Waa mashruuc il gebi furan; waxaad ka heli kartaa code isha ugu github ah.
Ilaalinta PIN. Waxaa weydiiyo PIN mar kulan ah codsi helaan xididka.
App walba si gooni ah loo qaybiyay kartaa.
Helitaanka Root keentay, gashid, iyo muuqaalada gaadhsiin.
Waxay qaban karo codsiyada helaan xididka badan waqti isku mid ah.
Updates aad si joogto ah suuqa, sidaa darteed waxaad heli doontaa taageerada ku daray in ay dhammaan qaybaha cusub Android dhow goobtii.
Waxaad sameyn kartaa muddada codsiga ka hor inta aysan waqti.
Haddii aad raadinayso app oo lacag la'aan ah, ka dibna aadan ka heli kartaa app ka fiican mid. Marnaba ma dareemi doontaa in aad tanaasul by ma u app lacag.
No oo maqani ammaanka app this, wax walba waa hufan.
App Tani waa wax yar oo culus marka la eego isticmaalka processor
Interface ayaa loo wanaajin karo, laakiin waxa ay noqon kartaa mid ah doorashada qof ahaaneed. Haddii aan jecli interface ka micnaheedu ma aha in aad isku dareemi doonaa.
Download Superuser ka Google Play Store >>
Waa app ah xidid Android loogu talogalay dadka khibrad leh ama ku dhiirigelinayaan, newbies ama amateurs waxaa lagula talinayaa in ay ka fogaadaan app this. App Tani fasaxaya oo dhan barnaamijyadooda si ay u helaan xididada mar faylka binary uu ku rakiban, waxa kale oo aad ka saari kara app in ka dib. Sidaa awgeed, ma heli doono wax baaritaan pop weydiisanaya ogolaansho ah si ay u helaan xididka, kuwa baaritaan pop laga yaabaa in diiqayaa, haddii aad isticmaasho badan oo Chine rujin. Isticmaalka app waxa aad ka fogaadaan cuncun in karaa.
Waxaad la qaadan doonaa helaan xididka xitaa haddii app tani waxaa uninstalled ama uu ku kharribeen mar faylka binary uu ku rakiban ah.
Waxa kale oo aad uninstall karaa app ka dib markii uu ku rakibidda faylka binary. Sidaa awgeed, waxaad badbaadin kartaa meel xusuusta.
Siiyaa helaan xididka si app kasta oo aan taasoo keentay in fasax oo badbaadin kartaa waqti, xusuusta iyo processor.
App ayaa waxaa loogu talagalay horumarinta iyo user khibrad leh, haddii aad dareento ammaan ah iyagoo siinaya helitaanka xididka ay keentay waxa loogu talagalay, markaas app ma waxaa loogu talagalay adiga.
Haddii aad ku sugan tahay caado ah degsado iyo ku rakibidda barnaamijyadooda geelaa random ka internetka, ka dibna app ma aha in aad u. Waxaad laga yaabaa in aad telefoon leben ay dhacdo in.
Version Free of app tani waxay muujinaysaa xayeysiis qaar ka mid ah, in laga takhaluso in, waa in aad iibsato version bixisay.
App Tani ayaa hadda diyaar u ah kuwa qalabka Android kuwaas oo ordaya on processor ARM ah.
App wuxuu ku salaysan yahay interface line amarka. Interface user Garaafka aan la bixiyo.
Download Superuser X [L] ka Google Play Store >>
# 1 software adduunka ayaa soo kabashada file deg deg ah, fudud oo si sahlan loo isticmaalo qalabka Android
Kabashada Support of noocyada kala duwan file: photos, video, xiriirada, fariimaha qoraalka ah, audio, wac taariikhda, taariikhda chat WhatsApp, waraaqaha, iwm
Articles badan oo ku saabsan Android soo afjarno
Tallaabooyinka lagu Root Samsung Galaxy S4
Android ka soo kabsado tirtiray Files
Kabsado Xiriirada tirtiraa Android
Kabsado SMS tirtiray ka Android
Top 12 Sababo aad u Root Android Devices